मैले देखेको पुरूष हिंसा – Education Awareness
मैले देखेको पुरूष हिंसा
५ असार २०७६, बिहीबार २०:५९
बिचार: श्रद्दा के.सी.
हरेक बुवा-आमा आफ्नी छोरी पराइ घर पठाउँदा आफ्नी छोरीको सुख-शयल अर्को परिवार अनि केटासँग माग्ने गर्दछन् । हो त्यसैगरी अर्की आमाले पनि आफ्नी बुहारीबाट छोराको लागि सुख र खुसीको आशा बोकेकी हुन्छिन् । आफ्नी छोरी पराइ घर पठाउँदा निःशब्द हुने, दाइजोको बिरोध गर्ने बुवा-आमाले आफ्नो छोरीले सुख पाओस् भनी ज्वाईलाई विदेश जान अनुरोध गर्दै लाखौ रकम लगानी गर्न राजी हुन्छन् । आखिर किन ? आफ्नी छोरी आफूबाट टाढा हुँदा शोकमा रुने बुवा-आमाले किन त्यो घरको छोरोलाई पनि किन पराइ बनाउछन् होला ।